Usuku My Pet » Six Flags Red To Spot The Date On First
Uma kuziwa usuku lokuqala, kungabakhona nokucindezelwa okukhulu nxazonke. What ukugqoka, lapho ukuya ngisho nalokho ukukhuluma. It kungaba kancane obuqand. Nokho, kukhona ukuziphatha ezimbalwa ezibalulekile kakhulu kufanele siqaphele for ngosuku lokuqala. Ngikhuluma mayelana izimpawu eziyisixwayiso red flag ngiphelile.
It kuyaqondakala ukuba ngabomvu usuku lokuqala, kanjalo Angikho bethi kufanele ahlaziye yonke imisho kanye nokunyakaza usuku lwakho kwenza, kodwa kukhona ezimbalwa big deal amadlambi ukuba siqaphe ukuze.
Imiyalezo Ngesikhathi Usuku
Ngiyaqonda manje siphila ubuchwepheshe emphakathini esindayo, kodwa nje ukubeka ifoni away. Ukubhala umyalezo ngesikhathi usuku nje isenzo esinjalo iluhlaza. Akukho kwenza umuntu azizwe sengathi kukhona ungakujabulisi kakhulu ukulalela kuka imiyalezo ngesikhathi usuku lwakho. Imibhalo Your kubangani bakho ungalinda amahora ambalwa. Ngakho uma amabombo out for ukuthi usuku lokuqala, ifoni yakho phezu buthule bese siyishiya ephaketheni lakho noma esikhwameni for the esele usuku. Uma bengakwazi ukusetha ifoni yabo eceleni ngosuku lokuqala, ngaphezu cishe abasoze ifoni yabo phansi.
Too okuyela Aggressive
Kukhona umehluko phakathi kokuba flirty futhi kokuba ngokocansi explicated. Ukwenza okushiwo abambalwa abangenacala muhle (ezifana ngokugcwele kafushane ngubo noma ukubukeka), kodwa uma baqala ukwenza imibono eyichilo more, kufanele alungise usuku lwakho. Wonke uthanda ukuba kuzosungulwa, Nokho kokuba umuntu baphumputha emlenzeni yakho futhi ikutshele ukuthi kabi bafuna ukuthatha ekhaya nje ungakhululekile. Uma ufuna senithandane isikhathi eside, ufuna usuku ozama ukuba ukukwazi futhi hhayi nje sigxile ukuthola nawe embhedeni.
Kuba never oluhle uma usuku sekuqalile nje futhi yena / yona ekugxeka kakade. Izibonelo: uma kufika evela ejimini futhi wazise usuku lwakho lokhu futhi kukhona response kuyinto efana "Oh, kanjalo THAT yakho uhlobo umuntu. Total gym rat?"Noma uma ufika ukuhlangabezana usuku bakho critique lokho isikhindi. Uma ekugxeka lokhu ekuqaleni, kungenzeka ukuthi iphethini izothatha futhi kuyoba njalo ukwahlulela izinqumo zakho.
Talking Way Too Much About Ndunankulu
Ingxoxo enhle ngokuvamile liqukethe Ukuhwebelana ngokulinganayo okwabelwana. Kukhona izikhathi lapho uma wena noma usuku lwakho inamahloni, lowo nganuleka kini ezimbili siyofeza more of the ingxoxo, okuyinto emihle. Nokho, uma usuku ngokuyinhloko ingxoxo eyodwa emaceleni, lapho usuku wakho njalo ukhuluma ngokwabo, kuba kancane kukhathaza. Okubi kakhulu, lapho iyokunquma uma ukhuluma ukukhuluma okwengeziwe ngokwabo. A usuku ithuba lokufunda okwengeziwe nomunye futhi ubone ukuthi uxhumana, hhayi ithuba wedwa mayelana amazing kanjani futhi ephelele wena.
Umsebenzi Living Situation
Angikho bethi bangayi ngosuku nomuntu ohlala ekhaya futhi akasebenzi-umnotfo ezinzima lezi zinsuku, kuyaqondakala. Uma abazange imali ozinzile iminyaka kubonakale a little ntofontofo kakhulu ngamalungiselelo abo eziphilayo emzini umzali wazo, mhlawumbe kufanele qhubeka. Kufanele futhi sikhathazeke uma nihluleka ukungitshela kwakho lokho ncamashi benza ukuze baziphilise. Kuyini ngasese ukuze ngomsebenzi wakho ukuthi nihluleka ukungitshela usuku lwakho? Ungase ufune ukwazi impendulo…
Nakuba lena kungase kubacacele (njengoba usuku lokuqala akalokothi isikhathi esikhulu ukuze baxoxe bengakahlangani ana), uma bakhulise ex yabo, nakani indlela bekhuluma ngabo. Kulungile uma nje ngabo kafushane, kodwa uma ngikutshele lokho a psycho nokuthi kungakanani bazonda kubo, wena ngempela akufanele ukuhlela usuku lwesibili. Alukho uhlobo inkulumo nolaka noma Ukuzehlisa mayelana abalingani babo esidlule kubonisa ukuthi baye ongathinteki ngokucacile kusukela ubuhlobo noma ukuthi kukhona nje ababayo ononya, lapho icala kungcono for the best aniqhubeki ngokuwabona.
Indlela Khuluma Dirty in a Relationship